अधुरो यात्रा (भाग १) – पुरु's कर्नर
Home » Old Blog » अधुरो यात्रा (भाग १)
अधुरो यात्रा (भाग १)
By Purushottam Adhikari 03, 09, 2013
साँझ पर्नलागेको थियो। अस्ताउन लागेको घाम क्षितिजमा टिलपिल गर्दै थियो। म हिडिरहेको थिए एकतमासले, तर कुनै गन्तव्य थिएन मेरो हिडाइको न कुनै निश्चित उदेश्यनै । चिप्लेढुंगाबाट सिधा दायाँ हानिए महेन्द्रपुल तिर, अनि पसे क्याफे अरोमा भित्र।
“वान सिगरेट प्लीज”, मैले अर्डर गरे, “एक कप कफी पनि।”
म क्याफेको त्यहि टेबलमा थिए जहाँ हामी पहिले सयौ पटक संगै हुन्थ्यौ। उसले सधै भन्थी छोड्देउ यो बेकारको सिगरेट पिउन, मलाई त गन्ध नै मन पर्दैन यसको।
म जिस्किन्थे, बरु तिमीलाई छोड्नुपरे छोडम्ला यो चै छोड्न सक्दिन म।
तर आज मलाइ सम्झाउने कोहि थिएन, म ढुक्क संग पिउन सक्थे एउटा, दुइटा, तिनओटा जति पनि। किनकी म आज एक्लो थिए, विल्कुल एक्लो, साँझमा चारोको आशामा छटपटाइरहेको बचेराझैँ। हुन पनि मेरो उ बिना को नै थियो र, सानैमा परिवारसँग टाडिएको म जसोतसो आज एउटा एन. गी. ओ. को आई. टी. म्यानेजर थिए । आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएको थिए, यहाँसम्म पुग्नुमा उसको ठुलो हात थियो।
ट्रींग ट्रींग मोबाइलको घन्टी बज्यो, छिरिंगले गरेको रहेछ । कोठामा कतिबेला आउने भनेर होला, कसैसँग बोल्न मन थिएन, फोन रीसीव नगरी यत्तिकै छोडिदिए । पछी म्यासेज गरे, आज खाना बाहिरै खान्छु, अलिक ढिलो हुनसक्छ । उ अनविज्ञ थियो मेरो स्थिति बारे ।
दुइटा सुर्य सकिसकेको थियो, म तेस्रो बाल्ने तयारी गर्दै थिए, वेटरले कफी टेवलमा राखिदियो ।
झमक्क अध्यारो भइसकेको थियो। अ पेग अफ रस्लान विथ स्न्याक्स, मैले अर्डर गरे। आज म स्वतन्त्र थिए, र आफुलाई आफैमा भुलाउन चाहन्थे । कुनै कुराको फिक्री थिएन मलाइ, आफ्नो भन्नेनै यसरी पराइ भइदिएपछी अब बाकि नै के थियो र मसँग। एक किसिमले रित्तो भएको थिए म, भित्रभित्रै खोक्रो भएर सुकेको मुढा झैँ ।
करिब ४ वर्ष अघि हाम्रो भेट भएको थियो। त्यो भेट एउटा अनौठो संयोग थियो। अनि मेरो जिन्दगीको टर्निंग पोइन्ट पनि ।
“हेल्लो, इट्स मी सुलोचना!” उसले हात अघि बढाउदै भनेकी थिइ, बी. आइ. टी. फर्स्ट सेमेस्टरको पहिलो दिनमा, जतिवेला कलेजको एउटा कुनामा म एक्लै झोक्राइरहेको थिएँ । एक्कासी यो आवाजले म झस्किएको थिएँ ।
“हाई, मी समिर !” मैले पनि हात लम्काउदै आफ्नो परिचय दिएँ ।
“इज दिस योर फस्ट डे ?” उसले स्थिति सामान्य बनाउदै सोधी ।
“एस” मैले जवाफ फर्काए । “तिम्रो नी ?”
“माइन टु” उसको उत्तर थियो ।
हाम्रो वार्तालाप अगाडी बढ्दै गयो । ऊ प्राय इंग्लिश एसेन्टमा जवाफ दिइरहेकी थिइ, लाग्थ्यो कुनै लेकसाइडमा बाटो बिराएर अल्मलिएको कुइरेनी सँग गफ गर्दैछु । सोचेँ, बाउआमाले गतिलै बोर्डिंग पढाएका रैछन । सामन्य औपचारिक परिचय भयो, घर, स्कुलिंग, प्लस टु आदि । पछि हामी क्लास एटेन्ड गर्न गयौं ।
अन्त्यमा उसले भनी, “ लेट्स बी फ्रेन्ड्स, ओके?”
“अफ कोर्स” मैले सहि थापें, मलाई पनि उसँग नजिकिने बहाना चाहिरहेको थियो, “घर जानेवेला सँगै जाँउ है?” मैले फ्याट भानीहालें ।
ऊ केटीहरुको हुलमा मिसीई, म लास्ट बेन्च तिर लागें, झट्ट एउटा विद्वानको वाणी याद आयो, सबसे क्षमतावान दिमागहरु कक्षाको लास्ट बेन्चमै पाइन्छ, म पनि कम्ता ट्यालेन्ट विद्यार्थी कहाँ हो र ।
खासै पढाइ भएन, सबै क्लासमा कोर्सका कुरा र आइ. टी. का विकासक्रममा कुरा भए, एउटा प्रोफेसरले आफ्नो जमाना र अहिलेको आइ टी ग्यजेट्सको गतिलै तुलना गरे ।
घर फर्कदा ऊ गेटमा मलाई कुरेर बसीरहेकी रहिछे, “ओ हीरो त्यता होइन यता, यता” उसको त्यहि उत्ताउलो अनि चन्चले आवाज सुनें । म ऊ भएतिर हानिए र हामी कलेज बाहिर निस्कियौ ।
नजिकैको स्टपबाट पोखरा मिनी माइक्रो कुर्दा ५ मिनट भैसकेको थियो, तर गाडी आउने कुनै छाँटकाँट थिएन । त्यतिखेरसम्म हामी बीच आजको क्लासहरुको बारेमा धेरथोर बहस भैसकेको थियो । म पढाइको भन्दा पनि उसको व्यक्तिगत कुरो र रुची खोतल्न खोजिरहेको थिएँ, तर मेसो मिलिरहेको थिएन । त्यत्तिकैमा गाडी आयो, अन्तिम सीट खालीनै देखिन्थ्यो हामी दुवै चढ्यौ । गाडीमा पनि केहि ख्यालठट्टा बाहेक खासै अरु गफ भएन । म पी. एन. क्याम्पस गेट अगाडी झरें, ऊ लामाचौर तिर लागी । झर्नु अघि भोलि सँगै कलेज जाने बहानाले उसको नंबर मागूँ कि जस्तो लागेको थियो तर आँट आएन, यसरी केटीहरुको नंबर माग्दा पहिले म दुइचोटी फसीसकेको थिएँ ।
वेलुकी खाना खाइहोरी ओछ्यानमा पल्टें । यसो फेसबुक लग इन गर्नुपर्यो भनी ल्यापटप लिएँ, अर्को ट्याबमा ट्वीटर र अर्कोमा जीमेल पनि खोलें । दुइटा फ्रेन्ड रेक्वेस्ट आएको रहेछ, एउटा स्कुलको पुरानो साथी रहेछ, अर्को चाँहि उही सुलोचना । म छक्क परे, कति छिटो रेक्वेस्ट पनि पठाउन भ्याईसकिछ । एसेप्ट गरिदिएँ, अनि प्रोफाइल चियाउन थालें, केटीहरुको प्रोफाइल चियाउन खप्पिस नै थिएँ म । एउटा ट्याबमा इन्फो र अर्को ट्याबमा फोटो खोलें । इन्फो सटिक थियो, आँखा गएर Favourite Quotations मा अड्कियो, “Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love” मदर टेरेसाको भनाई त्यहाँ उल्लेखित थियो, झट्ट दिउसोको उसको त्यो मधुर मुस्कान सम्झें, जव उसले आफ्नो परिचयको साथ मसँग मित्रताको हात अगाडी बढाएकी थिई । प्रत्येक एल्बम गर्दै फोटोहरु पनि सबै चाहारें । एउटा ल्यान्डस्केप मोडमा खिचिएको फोटोले औधी मन लोभ्यायो, पछाडीको व्याक्ग्राउन्ड फिक्का थियो उसको सुन्दरताको अगाडी । पर्पल टी-सर्ट र ब्लू जीन्समा मधुर मुस्कानको साथ ऊ उस्तै उत्ताउली र चंचल देखिन्थी, सायद सरांकोटको भ्यू टावर मुन्तिरबाट खिचिएको फोटो हुनुपर्छ त्यो ।
टुडुंग!!च्याट साउन्ड ले झसंग भए, म त त्यहि फोटोमा घोरीरहेको पो रहेछु ।
“ओ हीरो” उताबाट म्यासेज आयो ।
“वेटिंग फर यू टु कम” मख्ख पारिदिएँ ।
“सो स्वीट, भोलि कलेज सँगै जानुपर्छ है ?”
“स्योर, बगर आइपुगेपछि यो नंबरमा कल गर है” मैले मौकाको राम्रै सदुपयोग गरें ।
हासो ठट्टा गर्दा गर्दै कुनबेला भुसुक्क निदाइएछ ।
भोलि बिहान ७ बजे मोबाइलमा म्यासेज देखेँ, “गुड मार्निंग हीरो, बी इन द बस स्टप एट १०, ढिलो गर्ने होइन नी त्याँ”
यसरी दिन बित्दै थियो । सँगै कलेज जाने आउने, अनि बिदाको दिन नजिकै कतै घुम्न जाने । वाहिर जति नजिक थियौ कलेजमा हाम्रों बारेमा त्यति थाहा थिएन, किनकी कलेजमा हाम्रो व्यवहार सहज हुन्थ्यो ।
एकदीन शनिवार बेगनास ताल जाने प्रस्ताव मैले राखेँ, उसले पनि मञ्जुर गरी । खाना खाइहोरी हामी पृथ्वी चोकबाट लेखनाथ मिनी माइक्रो समाई त्यतातिर हानियौ । तालको डिलडिलै हामी अलिक हाइटमा रहेको होटेल लेक भ्यू तिर लाग्यौं । मैले दुई कप कफि अनि एउटा सिग्रेट मगाए, वेगनास तालको स्पेसल स्मल फिस फ्राई अर्को अर्डर थियो । निलो बेगनासमा सुन्दरी डाँडाको छायाँ परेको थियो, मौसम सफा थियो भने हावा पनि मन्द चलिरहेको थियो । वातावरण पुरै हाम्रो पक्षमा थियो । आज म मेरो मनको वह विसाउन चाहन्थें उसँग ।
“एउटा कुरा भनौं ?” मैले औपचारिक गफ सुरु गरें ।
“दुइटै भन न” ऊसले सधैझैं जिस्किदै भनी ।
“होइन, आइ एम सीरिअस”
“म तिमीलाई प्रेम गर्छु सुलोचना, तिमीलाई मन पराउछु, तिमीलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छु, के तिमी सधै यसरीनै मेरो साथ दिइरहन्छौ?” मैले एकै सासमा भने ।
त्यत्तिकैमा उसको मोबाइल बज्यो, घरबाट फोन आएको रहेछ ।
“वाट???????” ऊ ठुलो स्वरले चिच्चाई ।
एक्कासी कतै नहेरी फनक्क फर्केर रेस्टुरेन्टबाट झरी, अनि एक्कैछिनमा त्यहाँबाट विलय भई । कपमा आधा कफि बाँकीनै थियो, एकछिन वाल्ल परें, चुरोटले हातमा पोलेपछि पो झसंग भएँ, अघि के भयो थाहै भएन, आफुले आफैलाई बेगनास तालको छेवैमा पाएँ ।
Post Tagged with कथा, जीवन, प्रेम, भोगाई
10th March 2013 at 4:12 am
रोचक प्रस्तुती, ‘अधुरो-यात्रा’ को यो पहिलो थालनी
बस्,कुन मोडमा पुगेर उभिने प्रयासमा पत्रहरु अभिसप्त रहन्छन,तेश्ले नै उदेश्ये को निर्क्योल गर्ला!
10th March 2013 at 4:50 am
धेरै धेर धन्यबाद, आगामी भागमा रोचक ढंगले कथाको अन्त्य गर्ने प्रयास रहनेछ!!
samrat mgr says:
21st April 2013 at 4:07 pm
Dherai ramro lagyo malai katha sunera estai estai katha haru ajhai sunna paau 🙂
21st April 2013 at 4:58 pm
धेरै धेरै धन्यबाद!! 🙂